Dhalinyaro Somaliyeed Oo Ka Ganacsan Jirtey Daroogada Oo Xukuno Lagu Riday Dalka Ingiriiska | Berberatoday.com
Dhalinyaro Somaliyeed Oo Ka Ganacsan Jirtey Daroogada Oo Xukuno Lagu Riday Dalka Ingiriiska
London(Berberatoday.com)-Sagaal qof oo dhallinyaro ah ayaa Maxkamad ku taala dalka Britain ay ku xukuntay xukunno kala duwan,dhallinyaradan ayaa loo haysta dambiyo la xadhiidha in ay ka ganacsan jireen daroogada, waxaana dadkaasi maxkamada lasoo taagay lix kamid ah asal ahaan waa Soomaali,halka Saddexda kalena ay ahaayeen dad caddaan ah.
Ciidamada sirdoonka dalka Britain ayaa dhalinyaradan ku eedeeyey inay ka ka ganacsan jireen daroogada sharci darrada ah noocyadda cocaine iyo heroin ,waxa ay kasoo kala qabteen Degmooyinka Luton , Bedford, Norwich iyo Ipswich. sidoo kale Maxkamada waxaa la horkeenay daroogo culeeskeedu ahaa 4.58 Kiilo garaam iyo 121 garaam oo Daroogadda nooca Cocaine , hub iyo lacag ay haysteen dhalinyaradaasi.
Maxkamada ayaa dhalinyaradan ku riday xukuno xabsi oo u dhaxeeya 6 ilaa 7- sano oo xabsi ah, waxa ayna dhalinyaradan qaarkood ay qirteen in ay ku kug lahaayeen dambiyada loo haystay oo ahaa ka ganacsiga daroogada iyo in ay haysteen hub sharci darro ah.
Magacyada dhalinyarada Soomaaliyeed iyo xukunada lagu riday.
1-Cabdi Sugulle oo 30-jir ah,waxaa lagu xukumay xabsi 7 sanno iyo Badh.
2-Cali Haji, 27 jir ah, waxaa lagu xukumay 7 sanno,
3-Shaafici Cali oo 26 jir waxaa lagu xukumay 7 sanno iyo 3 bilood.
4-Mahad Xassan oo 29-jir ah, waxaa lagu xukumay Xabsi 6 sanno iyo 4 bilood.
5-Jaamac Aadam, oo 26-jir ah, waxaa lagu xukumay Xabsi 6 sanno iyo lix bilood..
6-Cabdi Nuur oo 21-jir ah waxaa lagu xukumay 6-sanno.